अमेजनमा कुकुरहरूका लागि उत्तम एयर फिल्टर मास्क के हो? - राम्रो एयर टीम द्वारा K9 मास्क
घर > अमेजनमा कुकुर मास्कहरू
अमेजनमा कुकुर मास्कहरू
अमेजनमा कुकुरहरूका लागि उत्तम एयर फिल्टर फेस मास्क के हो?
आज कुकुरहरूको लागि एयर फिल्टर मास्कको लागि दुई मात्र विकल्पहरू छन्। मूल K9 मास्क® अस्टिन, टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका मा बनाइएको वा चीन मा बनेको एक अधिक भर्खरको उत्पादन। दुबै अमेजनमा बेचिदैछ। तर कुन चाहिँ राम्रो छ?
कुकुरहरूका लागि एयर फिल्टर मास्क हालै नयाँ उत्पाद हो कुकुर मालिकहरूले उनीहरूका घरपालुवा जनावरहरूलाई ज wild्गल आगोको धुवाँ, शहरी धुँवा, मरुभूमि धूलो, ब्याक्टेरिया, मोल्ड र अन्य विषाक्त पदार्थहरूबाट जोगाउन। वायु प्रदूषण नयाँ मौसम बान्कीसँग एक बढ्दो समस्या हो जुन केहि क्षेत्रहरूमा सुक्खा मौसम र अरूमा ओसिलो मौसम सिर्जना गर्दैछ।
अमेजनमा बेचिएका कुकुरहरूका लागि एयर फिल्टर मास्कहरू तुलना गर्नुहोस्
यो द्रुत भिडियो सिंहावलोकनले तपाईंलाई बीचमा केहि समानताहरू र भिन्नताहरू देखाउँदछ K9 Mask® र अन्यहरू: AUOKOR, tchrules, र PeSandy। यी सबै तीन चिनियाँ बनेको मास्कहरू एक निर्माता द्वारा बनाइएको छ र त्यसपछि विभिन्न कम्पनीहरूद्वारा ब्रान्ड गरिएको छ। तिनीहरू एक-समय प्रयोग डिस्पोजेबल मास्क हुन्। यस भिडियो समीक्षाले तपाईंलाई कुकुरहरूको लागि विभिन्न वायु प्रदूषण मास्कहरूको सुविधाहरू र फाइदा खोज्न मद्दत गर्दछ। लक्ष्य कुकुर मालिकहरूलाई उनीहरूको घर पालुवा जनावरलाई हावा प्रदूषणबाट जोगाउन सहयोग गर्नु हो।
Amazon.com कुकुर मास्क:
कुचुरले सजिलै हटाउन लोचदार घाँटी पट्टा।
स्नुउटमा कुनै थूली फिट समायोजन छैन जसले प्रदूषित हवालाई मास्कमा चुहाउन अनुमति दिन्छ।
एक पटक प्रयोग डिस्पोजेबल फिल्टर।
कम गुणस्तरको निर्माण।
K9 मास्क एयर कुकुरहरु को लागी फिल्टर:
कम्फर्ट फिट सुरक्षित समायोज्य हुक र लूप घाँटी पट्टा।
मास्कको पछिल्तिर प्रवेश गर्ने प्रदुषित हवा विरुद्ध पेन्टि and र संरक्षणको लागि अनुमति दिन स्नुउटमा अनुकूल फिटको लागि थूथन हुक र लूप स्ट्र्याप अन्तर्गत समायोज्य।
प्रतिस्थापन एयर फिल्टर रिफिलहरूको साथ धुने मास्क।
दुई एयर फिल्टर विकल्पहरू - "सफा ब्रीथ" र N95 "चरम ब्रीथ" विभिन्न वायु गुणवत्ता वातावरण र भेरिएबल लगाउने समयहरूका लागि।
कम प्रकाश अवस्थाहरूमा दृश्यताका लागि परावर्तक प्यानल।
अनुकूलन रंगहरू उपलब्ध छन्।
हस्तनिर्मित उच्च गुणवत्ता शिल्प कौशल।
[यूट्यूब] K9 मास्क तुलना गर्नुहोस् (अमेरिकामा निर्मित) अन्य एशियाई बनाइएको कुकुर एयर फिल्टर मास्कहरूसँग